Huawei P50 Pro fakan-tsary fakan-tsary, ny marika farany avo lenta [fanadihadiana DxOMark] | Androidsis
Aaron Rivas | 27/08/2021 21:29 | Nohavaozina amin'ny 31/08/2021 22:01 | Huawei, hevitra
El Huawei P50 Pro Izy io no finday mandroso indrindra indrindra amin'ny marika, ary izy koa dia iray amin'ireo ambony indrindra amin'ny haavon'ny fakantsary, zavatra iray izay efa nohamafisin'ny DxOMark tamin'ny iray amin'ireo fanadihadihana farany nataony.
Ary ilay Huawei P50 Pro vaovao dia miaraka amina rafitra sary any aoriana izay azo eritreretina, ao anatin'izany sensor lehibe 50 MP miaraka amina f / 1.8 aperture, solosaina periskope 64 MP misy bikan'ny f / 3.5, zoro 8 MP misy zoro f / 2.2 ary sensor monochrome 40 MP farany misy aperture f / 1.6. Ny fakan-tsarimihetsika selfie, amin'ny lafiny iray, dia 13 MP ary manana aperture f / 2.4, fa etsy ambany dia hofakafakainay ny maodelin-tsary any aoriana sy ny valiny afaka omena amin'ny toe-javatra maro.
1 Izany no hatsaran'ny Huawei P50 Pro eo amin'ny haavon'ny fakantsary
Izany no hatsaran'ny Huawei P50 Pro eo amin'ny haavon'ny fakantsary
Ny Huawei P50 Pro dia satro-boninahitra tamin'ny laharana DxOMark ho finday miaraka amin'ny fakantsary tsara indrindra amin'izao fotoana izao, noho izany dia nihoatra ny Xiaomi Mi 11 Ultra mahery, izay teo an-tampon'ny latabatra saika hatramin'ny nivoahany.
Ary izany tokoa ny fakantsary an'ity finday ity dia manome kalitaon'ny sary tsara amin'ny scenario rehetra, maha-iray amin'ny vanim-potoana azo itokisana indrindra amin'ny fakana antsipiriany tena tsara. Izany dia hany ka ny valin'ny Huawei P50 Pro vaovao tamin'ny andrana natao dia manokatra toerana iray amin'ireo tsara indrindra ka hatramin'izao amin'ny fepetra rehetra, araka ny fanombanan'i DxOMark tao amin'ny tranonkalany.
Ny iray amin'ireo fizarana niavaka ity finday avo lenta avo lenta ity dia ao amin'ny fizarana zoom (zoom), miaraka amin'ny marika tsy azo hodinihina manodidina ny 107 isa, noho izany dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ity sehatra ity, ary misaotra an'ireo sary nalaina izay afaka mahatratra amin'ny zoom optika sy hybrid izay ananany. Miaraka amin'izany, mitana isa fito mihoatra ny mpitarika teo aloha amin'ity sokajy ity izy, ny Xiaomi Mi 10 Ultra. Raha ny fanontaniana dia ny valin'ny sary avy amin'ny fakantsary ultra-wide sy ny maodelim-telefaona no tsara indrindra nosedraina DxOMark hatreto.
Misy zavatra izay tsy nahitana laharana voalohany ny Huawei P50 Pro dia ao amin'ilay faritra horonantsary, farafaharatsiny tsy ao amin'ny laharana DxOMark. Ao amin'ity departemanta ity, ny telefaon'ilay orinasa sinoa dia nihemotra teboka iray tao aorinan'ny Xiaomi Mi 11 Ultra, izay miavaka tsara amin'ity sehatra ity, ka izy no tsara indrindra tamin'ity sokajy ity, zavatra iray izay indrindra noho izy manome ambany kokoa ny tabataba sy ny fahombiazan'ny feo ary vokatr'izany dia misy taratra mazava sy jiro ambany ihany koa.
Huawei P50 Pro andro sary | Loharano: DxOMark
Na izany aza, ny P50 Pro dia mbola tena tsara tokoa amin'ny fandraisam-peo, fisamborana sy fampisehoana valiny mahasarika izay avo lenta ihany no afaka mamoaka. Mazava ho azy, faritra iray amin'ny fitsikerana no votoatin'ny horonan-tsary, izay nahitana vokany sasany tsy ilaina toy ny hovitrovitra, ny aliasing ary ny fikajiana loko, olana telo izay tsikaritra indrindra amin'ny alina sy ny tsy fahampian'ny hazavana.
Ankehitriny, tsy mitsikera loatra intsony, Huawei dia naneho indray ny fahaizany amin'ny fari-tsary miaraka amin'ny finday, amin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ny P50 Pro, ny sainam-pireneny farany. Amin'izany fomba izany no nametrahan'ny mpanamboatra sinoa azy ho fari-pahaizana ambony indrindra sy telefaona izay tsy maintsy nokapohan'ny hafa raha ny sary sy ny horonan-tsary, zavatra izay tsy mora velively.
Miorina amin'ny zavatra nasongadin'i DxOMark tamin'ny famerenany, manana ny telefaona fampisehoana tsara ao anaty trano ary ny scenario izay tsy tiana sary tsara foana ny jiro. Ary amin'ity fizarana ity dia saika tsara kokoa noho ny fifaninanana hatrany, na amin'ny fakana sary miaraka amin'ny fakan-tsary na amin'ny fakantsary amin'ny tripod, izay rehefa mahazo ny valiny tsara indrindra satria tsy mandeha intsony ilay fitaovana. Mazava ho azy, ny elanelana mavitrika dia tsy ny tsara indrindra, fa mifamatotra amin'ny toerana voalohany amin'ny laharana.
Misy zavatra iray hafa izay miavaka tsara koa ny Huawei P50 Pro ny fandikana sy ny famerenana ny loko. Indrindra amin'ny resaka fifandanjana fotsy dia mety misy ifandraisany akaiky amin'ny fampiasana ilay sensor multispectral io, izay monchrome 40 MP. Mandritra izany fotoana izany, ny rafitry ny autofocus dia mazàna miasa tsara amin'ny toe-jiro rehetra sy amin'ny hazavana rehetra, miaraka amin'ny lagotra aotra shutter ary mifantoka tsara amin'ny solomaso. Amin'ny ankapobeny, ny P50 Pro autofocus dia mandeha tsara, raha oharina amin'ny fitaovana hafa ao amin'ny laharana.
Sary nalaina tamin'ny fampisehoana maodely bokeh fanokanan-tena tsara amin'ny lohahevitra ary fahitana tsy fahombiazana. Misy lesoka be dia be momba ny fandinihana lalina manodidina ny lohahevitra eo alohan'izay ary tsara ihany koa ny antsipiriany, ka ny P50 Pro no finday avo lenta vaovao ho an'ny bokeh.
Tratra ny Huawei P50 Pro isa tsara amin'ny sokajy alina, noho ny fahombiazana miavaka amin'ny subtests rehetra. Na dia tsy mirehitra sary ho an'ny flash aza ny jiro amin'ny maodely mandeha amin'ny tselatra fiara, dia mampiseho fisondrotana tsara sy haavo mavitrika ireo sary. Ny famoahana izany dia tsy hoe tsara amin'ny tarehy fotsiny, fa eo koa ny any aoriana. Rehefa mirehitra ny jiro (toy ny sary etsy ambany), ny fifandanjana fotsy sy ny lokon'ny hoditra dia tsy mahafinaritra toy ny ao amin'ny Huawei Mate 40 Pro +, izay fitaovana tsara indrindra amin'ny sokajy alina.
Ny isa amin'ny ankapobeny amin'ny vidéo an'ny fitaovana dia miankina amin'ny zava-bitany sy ny vokatra azony amin'ny toe-javatra isan-karazany. Ny Huawei P50 Pro dia nahatratra naoty 116 tamin'ny latabatra DxOMark, izay mamintina fa na andro na alina, ary koa eo amin'ny lafiny fifantohana, hovitrovitra ary ireo faritra hafa dia safidy tena tsara.
Na izany aza, na dia asongadinay aza fa tena tsara amin'ny alina izy io, manana efitrano manamarina izy io ho an'ity fizarana ity. Na izany aza, tsy misy isalasalana fa ny Huawei P50 Pro dia ohatra iray amin'ny fahaizan'ny orinasa miasa amin'ny teny fakana sary miaraka amin'ireo finday avo lenta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Fanaraha-maso fakan-tsary momba ny Huawei P50 Pro, ny farany avo lenta an'ny orinasa [DxOMark Analysis]
Ahoana ny fomba handraisana SMS amin'ny iPad toa ny iPhone